Nkọwapụta --lọ ọrụ - Youxing Shark （Shanghai) Science & Technology Co., Ltd.
Youxing Shark (Shanghai) Sayensị & Nkà na Co.zụ Co., Ltd.
Youxing Shark, nwere ihe karịrị afọ 20 n’akụkọ ihe mere eme, bụ ọkachamara na mmepụta nke ihe ọhụrụ polyurethane sealant na ihe ọhụrụ jigsaw mama, Ngwaahịa nke mmiri dị elu na nguzogide ihu igwe, ike dị elu, nke a na-ejikarị arụ ọrụ na ụlọ ọrụ osisi.
N’ime afọ iri abụọ, Youxing Shark na-agbaso “ebumnuche ndị ahịa, na-agbasi mbọ ike” maka ebumnuche azụmahịa, na-agba mbọ ịnye gị ngwaahịa na ọrụ dị elu. Anyị nwere ndị ọrụ R & D ọkachamara, site na nhọrọ nke akụrụngwa, nkenke nke ihe oriri na mmepụta, nyocha nyocha na mbupu, maka akụkụ ọ bụla na usoro na-anwale ule na njikwa. Anyị guzobere usoro njikwa mma anyị, nke dị elu karịa ISO9001 ： 2000 quality system.Youxing Shark na-emejuputa atumatu nke ihe okike bara uru maka ndị ahịa ịhazi ngwaahịa iji gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche, ma na-enye ndị ahịa nsogbu na nsogbu ọrụaka na-aga n'ihu Ọzọkwa ngagharị na ọhụrụ, na mma.
PLỌ AKWPKWỌ COMLỌ
● Ozi Anyị:
Lekwasị anya n'ihe ịma aka nke nchegbu ndị ahịa & na-aga n'ihu ịmepụta uru maka ndị ahịa
Onye ahịa, gbadoro ụkwụ na Striver.
Na-agbasi mbọ ike iji nweta ndụ ka mma!
Policy Iwu amụma:
Na-achụ mkpesa ndị ahịa efu
na-ekwe nkwa ngwaahịa mma
Vision Ọhụụ ụlọ ọrụ:
Mere ka ọ bụrụ ezigbo onye na-eweta ngwaahịa adhesives ọhụrụ
● Nkọwapụta aha:
Gbalịsie ike ime ihe dị iche na ịmepụta onye ndu otu narị afọ
NDLỌ AH IR ILỌ
Shark —— Shanghai Operation Center
Azụ Shark ——Shanghai Production Base
35,000 tọn / afọ
Azụ Shark —— Zhuhai Innovation Base
170,000 tọn / afọ
Shark polyurethane mama nwere ezigbo mmiri na-eguzogide, ihu igwe na-eguzogide ma na elu ike, na na ọtụtụ-eji na-ewu ụlọ ọrụ. Anhydrous polyurethane mama bụ ihe mejupụtara polyurethane gluu mejupụtara nke onye isi ihe na onye na-agwọ ọrịa. Isi Efrata nke isi gị n'ụlọnga ， eke oriri na mmanụ, polyol resin na ọtọ nwekwara. Onye na-agwọ ọrịa a bụ nke diphenylmethane-4,4 diisocyanate (MDI) nwere ihe karịrị otu ọrụ abụọ isocyanate na molekul ahụ. Ọganihu nke sayensị na teknụzụ na-eme ka ihe ọhụụ pụta na-aga n'ihu yana ihe ọhụrụ achọrọ maka arụmọrụ nke nrapado.
Mmiri dabere na nrapado (Jigsaw gluu)
Youxing Shark na-enye ahịrị zuru ezu nke nrapado maka ụlọ ọrụ osisi. A na-emepụta glusa Jigsaw dabere na njirimara nke ihe osisi na njirimara nke nnukwu nrụrụ n'ihi nsị na mmiri. Ọ nwere ike ịbanye n'ime osisi ahụ nke ọma, na gluu nwere usoro ihe nkiri magburu onwe ya na njikọta siri ike, ọkachasị ọ nwere ike ịmalite iji otu agwa dị iche iche nke eriri osisi. Ezigbo njikọ kemịkalụ, dozie nsogbu nke mfe ịgbawa nke ogwe osisi.